संगीत — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
आफ्नो सन्देश गर्न, यात्रा वरिपरि यो समय रेकर्ड गर्न एक अलग दृष्टिकोण लिएर. बरु धेरै उत्पादकहरु संग सहकार्य को, उहाँले आफ्नो अटलान्टा स्टुडियोमा सम्पूर्ण एल्बमको लागि लामो समयदेखि निर्माता Gawvi संग केवल काम. Sonically, वृद्धि पहिलो एकल “Shweet” Gawvi र यात्रा ली दुवै को विशाल प्रतिभा प्रदर्शन. यसको simmering उत्पादन संग, न्यूयोर्क-शैली कहानी संग क्लासिक तल दक्षिण हस्टन बाउन्स गर्न ट्रयाक nods. यात्रा गरेको पद तिनीहरूले अत्यावश्यक छन् रूपमा जीवन्त रहन. यसैबीच, “मीठो विजय” तत्काल invigorating कि यात्रा गरेको संक्रामक प्रवाह पकड लिन्छ रूपमा व्यापक हुक मा एक न्यूनतम पद बाट बनाउँछ. “MANOLO” उहाँलाई फेरि पहुंच रेकर्ड संग समूहमा हेर्नुहुन्छ’ आफ्नै मुख्य मानिस र घनिष्ठ मित्र Lecrae. सँगै, ती दुई कस बुना राइम आतिशबाजी बीच चलाखीपूर्ण अर्को हिप-हप प्रतिमान पल्टाउन.
एल्बम नयाँ सपनाहरु संग खोल्छ, J.R सुविधा. र थानेदार Baraka, परमेश्वरले हामीलाई सबै लागि चाहनुहुन्छ स्वार्थी महत्वाकांक्षा chasing को प्रशस्त जीवन हामीलाई राख्न भन्ने वास्तविकता गर्न Awakening जो. यात्रा को फ्रीमैन anthems रोबोट संग निम्नानुसार ?? र म सुविधा Lecrae राम्रो छु, जो स्वतन्त्रता मा घमण्ड, सन्तुष्टि र सुरक्षा ख्रीष्टमा फेला. काल्पनिक मा ??, Suzy रक सुविधा, यात्रा ध्यान सपना संसारमा हामी त वा लागि लामो बाँच्न पर्दाफास र डरलाग्दो सपना यो हुन बाहिर बारी हुनेछ. KB अन्य सहयोग, एन्डी Mineo, जिमी Needham, वी. गुलाब र धेरै अन्य, साँचो emancipator द्वारा बारेमा ल्याए जीवनको सौन्दर्य मनाउन, सबै कि को निर्माता र प्रकट राम्रो छ. फोहर चावल देखि उत्पादन गर्दा, एलेक्स medina, जी-शैली र यूसुफ Prielozny ख्रीष्टमा जीवनको सन्तुष्टि लागि एउटा भव्य पृष्ठभूमि प्रदान.
यो मानिसलाई माथि एल्बम, यो मानिसलाई माथि अभियान संयोजनमा, यो आन्दोलन गर्न ध्वनि भेटी द्वारा भनेर प्रश्नको जवाफ खोज्ने! Lecrae, यात्रा ली, थानेदार Baraka, Tedashii, प्रो, KB र एन्डी Mineo साँचो बाइबलीय पुरुषार्थ गर्न हिप-हप संस्कृति मा मानिसहरू कल छन् द्वारा समेट्न अप: साहसी भई अग्रणी, तिरस्कार passivity, जिम्मेवारी स्वीकार र नम्रता पछि लाग्दा, ख्रीष्टमा पश्चात्ताप र विश्वास मार्फत.
दुई संसारहरू बीच
यात्रा ली एक अक्सर गाह्रो मा आफूलाई पाता, तर अन्ततः राज्य प्रतिज्ञा गर्नुभएको–अनन्त जीवनको लागि किस्मत, अहिलेसम्म यो एक मार्फत नेभिगेट गर्न tasked. आफ्नो तेस्रो एल्बम, दुई संसारहरू बीच श्रोताहरूले पनि सुख र हामी विश्वासीहरू सबै अनुभव संघर्ष झल्काउँछ कि व्यक्तिगत विचार को एक संग्रह प्रदान गर्दछ. ट्रयाकको उद्घाटन शीर्षक, रियल लाइफ संगीत,?? यात्रा गरेको नवीनतम परियोजना आशा गर्न के संक्षिप्त.
तपाईं स्पष्ट उहाँलाई देख्नुहुन्छ? फिर्ता दोस्रो डिस्क संग, तपाईं स्पष्ट शास्त्रपदको लेन्स मार्फत परमेश्वरले हेर्न को लागि यात्रा ली तरखरमा छ, दिने तपाईं एक 20/20 दृष्टि. अविश्वसनीय सुविधा, विविध उत्पादन, Lecrae केही सुविधाहरू साथ, Tedashii, Shai लिन्ने, र अरूलाई.
तिनीहरू केवल थाहा पाए भने
यात्रा ली गरेको Debut एल्बम! को को यो जवान र unashamed सदस्य 116 Clique केही गम्भीर गर्मी तल राखे “तिनीहरू केवल थाहा पाए भने”. तपाईँले यो एक मा बाहिर सम्झना गर्न चाहँदैनन्. यात्रा ली तपाईं ख्रीष्ट तपाईंको पैदल मा सामना विभिन्न मुद्दाहरू एक टन मा छुन्छ, हामी त्रिएकको 2nd व्यक्ति केही गम्भीर शिक्षा हाम्रो आफ्नै जीवन जाँच्न गर्नुपर्छ कसरी बाट. यो सीडी पक्का COP बनाउन र गीत खन्न. तपाईं मा यात्रा ली सुनेको 116 Clique संग्रहण एल्बम र अब तपाईं आफ्नो पहिलो पूर्ण टोनी स्टोन द्वारा उत्पादन संग विज्ञप्तिमा वास्तविक सम्झौता प्राप्त गर्न सक्छन्, JR, Lecrae, र अधिक, राजदूत द्वारा प्लस केही ठूलो सुविधाहरू, Lecrae, Tedashii, ज्वाला र अरूलाई!